Dunida Xoogga Ayaa Lagu Kala Baqdaa! Heshiisyada Taariikhda Galay. |
Dunida Xoogga Ayaa Lagu Kala Baqdaa! Heshiisyada Taariikhda Galay.
Dalka Maraykanka ayaa heshiis la saxiixaday Dalka Tuniisiya bishii Ogost 1, sanadkii, 1797, iyadoo dhex dhexaadinta ay waday dalka Algeria oo hore heshiis ula sexeeday.
Heshiiska waxa uu ka koobanaa 23 qodob, waxana dawladda Tunisiya ay ku ballanqaaday inay sugeyso amniga maraakiibta Mareykanka ee ku sugan badda cad (Miditereeniyanka) oo aan la xidhi doonin dadka Mareykanka ah, haddii ay saaran yihiin maraakiibta Mareykanka ama kuwa kaleba, wax dhibaato ahna aan loo geysan.
Heshiisku waxa kale oo uu dhigayay in haddii labada dal (Maraykanka iyo Tunisya) ay dagaalamaan, in maraakiibta ganacsiga ee dalka kale aan wax dhibaato ah loo geysan iyaga iyo dadka saaranba.
Heshiiska ayaa u oggolaanayay in xaakimka Tunisia uu xaq u leeyahay inuu adeegsado maraakiibta Maraykanka markii uu baahdo, sida uu xaqiijiyay taariikhyahan Dr. Kamal Gerfal.
Taariikhyahanka Gerfal waxa uu qoray in heshiisku uu dhigayay in canshuuraha laga qaado badeecadaha Mareykanka ee soo gaadha dekedaha Tunisia ay noqoto 10%, halka 3% laga qaadayo alaabooyinka ka ka degaya dekedaha Mareykanka ee Tuunisiya ka taga.
Waxa kale oo Mareykanku ballanqaaday inuu hadiyado siinayo Xaakimka Tuniisiya iyo kuwa maamulka kula jira ee dhow markay heshiiska ku saxeexeen munaasabada rasmiga ahayd, taas oo muujinaysa in dhinaca Tunisia ay ahayd midda iyadu leh mudnaanta weyn, taasi oo ahayd awooddii ciidan ee xoogan ee sebenkaasi ay lahaayeen dalalka Islaamku.
Wakhtigaasi waxa xooggana dalalka ku yaalla Badda cad ee Moroco, Aljeriya, Tunisiya iyo Liibiya. Iyadoo dalka Maraykanka dawladii ugu horaysay ee ictiraaf siisa markii uu ka xoroobay Ingiriiska ay ahayd dawlada Moroko.